Otú nyefee Music si iPhone ka iTunes na site na iTunes ka iPhone
> Resource> Music> Nsogbu ịgba égbè banyere transfer music si itunes ka iphone
Nsogbu ịgba égbè banyere transfer music si itunes ka iphone
Nsogbu ịgba égbè banyere transfer music si itunes ka iphone enweghị syncing
Tinye Music ka iPhone ma ọ bụ iPod-ejighi eriri
iOS 8 agaghị mmekọrịta Music na iTunes
N'ihi na nyefe nke Music si itunes ka iphones enweghị syncing usoro na-agụnye ụfọdụ nke nzọụkwụ, nke na-kọwara dị ka n'okpuru:
• Jikọọ iPhone gị na kọmputa
• Mgbe ahụ Open iTunes
• Họrọ iPhone na iji Device menu na n'elu-ekpe nke ihuenyo
• Pịa Summary nhọrọ ma họrọ Iji aka Jikwaa Music na Videos
• Mgbe ahụ Pịa na Mee
Na dịruru ná njọ, ị chọrọ ka ịgbakwunye music ka iphone ma ọ bụ iPod-ejighi eriri, na-enweghị syncing ihe niile na ngwaọrụ na iTunes, niile ị chọrọ agbanye iTunes Wi-Fi mmekọrịta. Site na ndabara a-ejighi eriri syncing ka atọrọ ka anya ma si otú gị mkpa-atụgharị mma 'ON'. The n'okpuru usoro ndibiat otú e si enyere usoro nke enyere Ikuku syncing N'etiti iOS & iTunes. Lee ndị nzọụkwụ tinyere snapshots:
• Jikọọ iPhone, iPod aka, ma ọ bụ iPad na kọmputa na iji eriri USB. Nke a nzọụkwụ achọ ojiji nke Cable na maa nke a bụ nanị mgbe ị chọrọ iji ya na dum usoro.
• Mgbe ahụ Mwepụta iTunes na họrọ iOS ngwaọrụ, mgbe ahụ, n'okpuru "Summary" ihuenyo gbadaa chọta 'Nhọrọ' dị ka e gosiri na screenshot
• Next mkpa ka ị ego igbe 'mmekọrịta na nke a iPhone n'elu Wi-Fi', nke a ga-egosi nnọọ iche bụrụ na ngwaọrụ bụ ihe iPod ma ọ bụ iPad
• Ugbu a pịa 'Mee' aka wireless syncing na na ngwaọrụ
Ugbu a usoro nke na-agbakwunye nke music ka iPhone ma ọ bụ iPod-ejighi eriri na-anọgide, nke na-eme site na-esonụ:
The mfe nzọụkwụ maka usoro mgbe i nwere n'akụkụ nyeere na iTunes 11+ mkpa ka ị na-ahọrọ 'Gosi sidebar' site View menu.
• Mgbe ahụ Họrọ Media ịgbakwunye na ikpuru na dobe ha n'elu ka ndị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka na sidebar
• Usoro nke nyefe nke songs amalite. Ka songs nyefe. The syncing nke ngwaọrụ nwere ike kpebisiri ike site obere spinning na akara ngosi na iOS aha mmanya ma ọ bụ spinning na akara ngosi na iTunes
Ọtụtụ ọrụ e chere ihu a nsogbu bụrụ na ha kwalite ka iOS 8. Ndị a ọrụ kọrọ na n'ihi na ụfọdụ amaghị ihe, ha niile music na-arahụ kpamkpam na ihe ọ bụla mgbalị ha tinye n'ọrụ, ọ dịghị music mgbe Nwela bufee. Iji dozie ihe iseokwu a, e nwere ụfọdụ nzọụkwụ, nke na-aha dị ka n'okpuru:
• ikwunye na iPhone ma ọ bụ iPad na-agba ọsọ iOS 8 ma ọ bụ karịa na ẹkedori iTunes
• Họrọ iPhone si dropdown menu, nke na-egosi
• wee họrọ Music na n'akụkụ navigation panel
• Mgbe ahụ, uncheck mmekọrịta Music nhọrọ wee pịa Mee ma ọ bụ mmekọrịta.
• Ozugbo mmekọrịta zuru ezu, recheck igbe maka mmekọrịta Music na pịa Mee ma ọ bụ mmekọrịta ọzọ.
• Kwụpụ gị iPhone ma ọ bụ iPad na-ahụ ma ọ bụrụ na gị music bụ azụ
Na ọtụtụ nke ikpe, nsogbu niile bụ gara na ị ga-enwe music dị ka tupu.
N'ihi na ọtụtụ n'ime anyị ọrụ na-agụ, e nwere a blog n'elu ikpo okwu, nke nwere ike-abịa dị ka a akwa aka dị iche iche na ndapụta. Nke a blog n'elu ikpo okwu na-akọwa ọtụtụ mbipụta, ma na-eduzi nzọụkwụ pụtara n'ihi na nsogbu N'ọgbụgba égbè nke ndị dị iche iche okwu. Ma ọ na-adị na-ebufe ọdịnaya si ochie ekwentị ọhụrụ otu ma ọ bụ ijikwa android ntị na mbadamba, nke a n'elu ikpo okwu, na-enye aka dị iche iche na mkpa maka nile Genres nke ọrụ. The wondershare n'elu ikpo okwu bụ a otu nkwụsị ngwọta maka niile ngwaọrụ dị ka iphone, Emmanuel, iPod, android, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Wondershare, Nke bụ n'ezie otu pụrụ ịdabere na ebe dị iche iche na mkpa, nakwa solves nsogbu metụtara music nyefe si iphone ka itunes.
Nyefee music ọ bụla na iPhone ọ bụla iTunes Library na dị iche iche kọmputa;
Nyefee ma iTunes Store zụrụ na-abụghị zụrụ songs si iPhone ka iTunes;
Detuo ha niile songs na listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes enweghị eke oyiri;
Anọgide artwork, play adabere, rankings, wdg n'oge na-ebufe;
Nkwado iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5s, 5c, 4s, 4, 3GS na-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9;
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare TunesGo
Download na wụnye Wondershare TunesGo na kọmputa gị. Iche iche Windows na Mac na nsụgharị ndị ma dị. Wondershare TunesGo na-eme ka ọ dị nnọọ mfe n'ihi na ị nyefee songs si iPhone ka iTunes, kpọmkwem, nyefee ọ bụla song ọ bụla na iPhone ọ bụla iTunes Library. Site na iji ya, ị ga-na-na-azịza otú nyefee zụrụ music si iphone ka itunes. Na-eche na-agbalị ya!
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa
Ẹkedori Wondershare TunesGo. Jiri gị iPhone eriri USB jikọọ gị iPhone na ikwunye na eriri USB kọmputa gị USB oghere. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, gị iPhone ga-egosipụta na isi window nke Wondershare TunesGo na isi Ama gị iPhone egosipụta.
Nzọụkwụ 3. Nyefee Music si iPhone ka iTunes Library
Na isi window, ị nwere ike pịa ohere ngwangwa "Iji iTunes" idetuo niile songs na listi ọkpụkpọ site na gị iPhone gị iTunes Library. N'oge usoro, Wondershare TunesGo ga iyo si songs na listi ọkpụkpọ ama ụzọ ọpụpụ na gị iTunes Library, na-ezere ha na oyiri.
I nwekwara ike pịa "Media" na n'aka ekpe ịbanye Music window. Si ebe a, ị pụrụ ịhụ niile songs na gị iPhone. "Smart Mbupụ na iTunes" ọrụ dị ka "Iji iTunes", nke ga-agafeta niile music si gị iPhone ka iTunes Library. Iji nyefee họrọ songs si gị iPhone ka iTunes Library, ego songs na pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Export ka" ma họrọ "Mbupụ na iTunes Library".
Otú nyefee ngwa site iPhone ka iTunes & si iTunes ka iPhone
Guide: otú nyefee Music site na kọmputa na-iPhone na site na iPhone ka Computer
2 Ụzọ Nyefee Playlist si iTunes ka iPhone